Kutanga beta yewatchOS 7.1 uye tvOS 14.1 vagadziri | Ndinobva mac
Kutanga beta yewatchOS 7.1 uye tvOS 14.1 vagadziri
Isu tatova neiyo yekutanga beta shanduro dzeiyo nyowani yekushandisa system watchOS 7.1 uye tvOS 14.1 asi nekuwedzera Apple inoburitsa yekutanga beta vhezheni yeIOS 14.1 uye iPadOS 14.1 yevanogadzira. Mune batch iyi nyowani ye betas ikozvino, iyo isingazowoneka ichave macOS 11.1 Big Sur, nekuti Apple haisati yaburitsa vhezheni yekupedzisira yeiyo inoshanda sisitimu. Ichokwadi kuti dzimwe nguva kambani inotangisa yapfuura beta vhezheni yevagadziri, asi mune ino kesi yanga isiri iyo nyaya.
Pachiitiko ichi shanduro nyowani dzakasvika mambakwedza munyika medu uye izvo hazvisi zvakajairwa mukuburitswa kweyekutanga betas, asi chokwadika, gore rino zvese zviri kunze kweyakajairika. Pakupedzisira izvo zvatiri kufarira kuziva ndezvekuti mavhezheni matsva anowedzera nhau dzinokosha uye mune ino kesi vanogadzira vanoita kunge vasingaratidze chero nhau kunze zvakajairika bug fixes uye kugadzirisa matambudziko kwakaonekwa mune yepamutemo vhezheni.
Rangarira kuti idzi beta shanduro dzinogona kunge dziine mabugs kana kusaenderana nemamwe maficha aunoshandisa muzuva rako zuva nezuva, saka zviri nani kugara padivi uye kunyanya kumirira kuti veruzhinji beta shanduro dzibudiswe, kunyanya nekuda kwezvinogona kuita matambudziko pamwe neApple Watch. Zvichatibata nyatso tevera shanduko yeiyi mitsva beta beta Uye isu tinotarisira kuti Apple ichakurumidza kuburitsa vhezheni yekupedzisira ye macOS 11 Big Sur kuitira kuti zvese zvienzane maererano ne beta vhezheni vhezheni uye zviri pamutemo vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Kutanga beta yewatchOS 7.1 uye tvOS 14.1 vagadziri
Kunyangwe iwe uine akawanda maApple ID, iwe unogona kutora mukana weApple One
Iyo Apple Watch Series 6 Solo Loop inopfuura kungoita aesthetics